Fantatry ny profesora Geoffrey Lipman fa andro lehibe ho an'ny fitsangatsanganana, fizahan-tany ary fiovan'ny toetrandro io
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Fantatry ny profesora Geoffrey Lipman fa andro lehibe ho an'ny fitsangatsanganana, fizahan-tany ary fiovan'ny toetrandro io
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Inona no mahasamihafa azy indray andro any? Miaraka amin'ny fanokanana any Etazonia sy ny filoha Biden izay mamerina ny firenena amin'ny fifanarahana momba ny toetrandro any Paris, hamerina ny tanjona kendrena izany. Faly be ny veterana fizahan-tany sy ny manam-pahaizana momba ny fiovan'ny toetrandro Profesora Geoffrey Lipman.
Androany i Etazonia dia niverina indray tamin'ny Initiative momba ny toetrandro any Paris. Vaovao lehibe izany, ho an'ny Profesora Geoffrey Lipman, mpanorina ny Sun Program. (SunX)
SUNx - Tambajotra matanjaka matanjaka - dia rafitra vaovao ho an'ny toeran'ireo mpizahatany sy ny mpandray anjara amin'ny fananganana toetoetran'ny toetrandro mifanaraka amin'ny tanjon'ny Fifanarahana Paris amin'ny alàlan'ny Travel Friendly Travel. Izy io dia tantanan'ny Ivontoerana Green Growth & Travelism (GGTI), monina any Belzika.
Araka ny filazan'ny profesora Lipman, tsy misy atahorana ny zanak'olombelona tokana noho ny fiovan'ny toetrandro - izany eXzava-dehibe. Masoandrox hifantoka amin'ity zava-misy ity ary hanome eXfanovana ny vahaolana maranitra, fitaovana ary loharanon-karena hanampiana ny vondrom-piarahamonina sy ny mpandray anjara amin'ny fizahan-tany hahatakatra ny baikon'ny lalàna mifehy sy ny fotoana mety amin'ny tsena.
Nizara ny profesora Lipman eTurboNews ny dikan'izany ho azy sy ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany, fa i Etazonia dia miverina amin'ny Internet miaraka amin'ny Fifanarahana momba ny toetrandro any Paris notarihin'ny filoha Biden.